Raha Tia Antsika Andriamanitra, Rahoviana no Hofaranany ny Fijaliana?
NISY horohoron-tany namely an’i Lisbonne, any Portogaly, ny marainan’ny 1 Novambra 1755. Safotry ny ranomasina ilay tanàna taorian’izay ary nirehitra, ka simba ny ankabeazany ary aina an’arivony no nafoy.
Hoy ny gazety iray any Kanada, taorian’ilay horohoron-tany tany Haïti tamin’ny 2010: “Ireo loza lehibe rehetra mitranga dia itsapana ny olombelona raha mino hery iray ambony kokoa izy ireo na tsia. Fitsapana mafy kokoa anefa ny loza sasany, toy ilay tany Haïti, izay mitovy amin’ilay [loza lehibe] tany Lisbonne.” Izao no famaranan-tenin’ilay gazety: “Nafoin’Andriamanitra angamba i Haïti.”
“Mahery Indrindra” i Jehovah Andriamanitra ka mahavita mamarana ny fijaliana. (Salamo 91:1) Afaka matoky koa isika fa mihevitra antsika Andriamanitra. Nahoana?
Inona no fantatsika momba an’Andriamanitra?
Mangoraka an’ireo mijaly izy. Hoy izy tamin’i Mosesy, rehefa nandevozina sy nampijalina tany Ejipta ny Israelita: “Hitako mihitsy ny fahorian’ny oloko any Ejipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon’ireo manery azy hiasa. Fantatro tsara ny fijaliany.” (Eksodosy 3:7) Tsy hoe tsy miraharaha ny fijalian’ny olombelona àry Andriamanitra. Hoy i Isaia mpaminany rehefa nijaly ny Israelita, taonjato maro tatỳ aoriana: “Ory izy nandritra ny fahoriana rehetra nanjo an’ireo.”—Isaia 63:9.
“Ara-drariny daholo ny lalany.” (Deoteronomia 32:4) Manao ny rariny foana Andriamanitra ary tsy manavakavaka. “Miaro ny lalan’izay tsy mivadika aminy” izy, nefa “mamaly fahoriana an’izay mampahory” ny olo-marina. (Ohabolana 2:8; 2 Tesalonianina 1:6, 7) Tsy manavakavaka izy ka “tsy mba manaja ny olona ambony mihoatra noho ny olona ambany, satria samy asan’ny tanany ireny.” (Joba 34:19) Andriamanitra no tena mahay mamarana ny fijalian’olombelona. Toy ny fehy lamba kely atao eo amin’ny ratran’ny olona voatifitra kosa ny vahaolan’ny olombelona. Mety hanakona an’ilay ratra ilay izy nefa tsy mahasitrana azy, sady tsy manamaivana ny fanaintainan’ilay marary akory.
Inona no hataon’ny dokotera amin’ny olona iray voatifitra? Hofeheziny kely fotsiny ve ny ratrany?
“Mamindra fo sy tsara fanahy” Andriamanitra ary “be hatsaram-panahy feno fitiavana.” (Eksodosy 34:6) Inona no dikan’ny hoe “mamindra fo”, ao amin’ny Baiboly? Fangorahana sy alahelo mahatonga olona iray hanampy olon-kafa. Manondro “olona atosiky ny fony hanampy olon-kafa mila ampiana” ny fototenin’ilay teny hebreo nadika hoe “tsara fanahy.” Milaza ny Diksionera Teolojikan’ny Testamenta Taloha (anglisy) fa midika hoe “fanampiana olona mijaly na manan-java-manahirana” ilay teny nadika hoe “hatsaram-panahy feno fitiavana.” Tsy hoe malahelo fotsiny i Jehovah Andriamanitra rehefa mijaly ny olona iray. Te hanampy koa izy satria mamindra fo sy tsara fanahy ary be hatsaram-panahy feno fitiavana. Azo antoka àry fa hamarana ny fijaliana izy.
Noresahin’ny lahatsoratra teo aloha fa tsy Andriamanitra no tompon’andraikitra amin’ireo zavatra telo mahatonga ny fijalian’ny olombelona ankehitriny. Andao àry hojerentsika izay tompon’andraikitra amin’izany.
Andriamanitra no nitari-dalana an’i Adama tamin’ny voalohany. Nolaviny anefa ny fitondran’Andriamanitra rehefa nomena safidy izy, ary nandramany hoe manao ahoana izany tsy miankina amin’Andriamanitra izany. Tsy noraharahainy ilay fampitandreman’i Jehovah ao amin’ny Genesisy 2:17 hoe: “Ho faty tokoa ianao.” Lasa mpanota sy tsy lavorary ny olona rehefa tsy nanaiky an’ilay fitondran’Andriamanitra tonga lafatra. Hoy ny Baiboly: ‘Niditra avy tamin’ny olona iray ho amin’izao tontolo izao ny ota, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka niely tamin’ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra.’ (Romanina 5:12) Hesorin’Andriamanitra anefa ny vokatry ny ota.
Efa voalaza teo fa nolavin’i Adama, ilay lehilahy voalohany, ny tari-dalan’Andriamanitra. Izany indrindra anefa no miaro ny olombelona, eny fa na amin’ny hetraketraky ny natiora aza. Toy ny marary iray tsy manaiky hokarakarain’ny dokotera mahay sy za-draharaha izy. Mety hijaly ilay marary raha minia tsy mahalala an’ireo loza sy olana mety haterak’ilay aretina. Efa fantatr’ilay dokotera anefa ireo. Mahatonga loza koa matetika ny fanimban’ny olona ny tany. Mampidi-doza, ohatra, ny fomba fanorenan’izy ireo trano ary tsy raharahainy ny herin’ny natiora. Tsy havelan’Andriamanitra hitohy mandrakizay anefa izany.
Nahoana no mbola navelan’Andriamanitra hitondra an’izao tontolo izao i Satana rehefa avy nikomy? Milaza ny boky iray fa “afaka manome tsiny ny mpitondra teo aloha ny mpitondra vaovao rehefa misy olana, mandritra ny fotoana kelikely voalohany itondrany.” Andriamanitra no Mpitondra teo aloha, ary i Satana izao no “mpitondra an’izao tontolo izao.” (Jaona 12:31) Raha naongan’i Jehovah aloha kokoa i Satana ary tsy nahomby, dia mety ho afaka nanome tsiny an’Andriamanitra. Nomena fotoana ampy hitondrana an’izao tontolo izao anefa i Satana, ka hita hoe tsy mahay mitondra. Mbola mipetraka anefa izao fanontaniana izao: Ahoana no ahazoantsika antoka fa hifarana ny fijaliana?
Hizara Hizara Tsy Miraharaha Antsika ve Andriamanitra?